IiHacks ezisecaleni kwabafileyo 🥇 Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
I-Gamepron ine-Hacks Dead Dead efanelekileyo kuzo zonke iimfuno zakho zokudlala. Nokuba yi-Deadside Aimbot, i-ESP, iWall Hack, okanye iNoRecoil, zonke ezona ndawo zidumileyo zeHackside Dead zilapha.
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge ii-hacks zethu ezingasekhoyo, qiniseka ukuba isixhobo osikhangelayo ukuba usithengile sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu Icaleni Hacks
IiHacks ezisecaleni, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Thenga Icaleni IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo ongathanda ukuthenga izixhobo kuwo, sinemidlalo emininzi esinokukhetha kuyo
Ngeempawu ezininzi zokukhangela ezikhoyo, khetha leyo ifanele iimfuno zakho zokukopela
Yenza intlawulo yakho! Iintlawulo zethu ziya kuphathwa kusetyenziswa iprosesa yethu ekhethekileyo yokuhlawula ifumaneka apha kuphela.
Ukufumana ukufikelela kwiqhosha lakho kunye nokukhuphela iiHacks ezisecaleni!
Emva kokufumana isitshixo semveliso kwiGamepron unokuzikhuphela ngokukhohlisa ngokufanelekileyo
Kutheni usebenzisa i-Gamepron Deadside Hacks?
Icala elisecaleni ngomnye umdlalo wokuphila oza kuvavanya amandla akho, njengoko uninzi lwabantu lungasayi kuba nomonde ofunekayo wokwenza inkqubela phambili enkulu kulo mdlalo. Zininzi izinto zokuguba ngelixa udlala i-Deadside, oko kuthetha ukuba izinto zinokubonakala ngathi "ziyadina" kunokuba zikhawuleze- ukuba ufuna ukonwabela umdlalo ngokujolisa kumacandelo amnandi, ngokuchaseneyo nokuphulukana nemidlalo, sisebenzisa I-Deadside Hacks iya kukusebenzela. Abadlali beGamers baya kwenza nantoni na eyimfuneko ukukhusela i-Deadside, kwaye kungenxa yokuba ayingomdlalo wesiko lo! Kufana nokubaleka eTarkov ngengqondo yokuba uya kuqokelela izixhobo kunye nezinye izinto eziluncedo (njengesixhobo, izixhobo kunye nezithambiso), kwaye nakwindlela yokuba uninzi lwabadlali kwi-Deadside banobuchule obumangalisayo. Nokuba uzama ukuphanga rhoqo okanye ukuthatha inxaxheba kwi-PvP (Player ngokuchasene noMdlali), kuyakubakho ithuba kuye wonke umntu ukuba abe ne-Deadside.
Unokukhetha ukusebenza kunye nabahlobo bakho kwaye uzulazule kwintlango eyinkqantosi oyibiza ngoku njengekhaya, okanye unokukhetha ukwehla ngendlela yengcuka eyodwa. Nantoni na okhetha ukuyenza ayinamsebenzi, njengoko i-Deadside Hack yethu izakukugcina uxhobile ukuphatha nayiphi na imeko eza kuwe. Nokuba kukhutshwa abachasi besebenzisa i-Deadside Aimbot yethu okanye ukugcina nje iithebhu kwindawo yabo kunye ne-Deadside Wall Hack, izinto ezininzi eziluncedo ziya kukunceda ufumane impumelelo kumdlalo.
Zonke izixhobo zethu zinokuphuhliswa liqela lethu labaqeqeshi okanye imithombo evela kwelinye lamaqabane ethu athembekileyo, zonke ezaziwayo ngaphakathi koluntu lokugenca. Ungonwaba ekugqibeleni xa uvula i-Deadside ngokukhohlisa kwethu okwenziweyo, njengoko uyazi ukuba kuya kuba ngamava anelisayo ngalo lonke ixesha ulayisha umdlalo. Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa ukusebenzisa zonke izinto ezimangalisayo ezibandakanyiweyo ngaphakathi kuHack yilelo elibi likaHack yile nto iseyinkqubo enzima. Siye sayihlengahlengisa inkqubo ukuze nabona basebenzisi abaninzi baqala ukubanakho ukuxhamla kwiHacksside Hacks yethu!
Ngexesha elizayo xa ucinga malunga nokugenca kumdlalo wakho owuthandayo (nokuba ngu-Deadside okanye enye into), khumbula nje ukuba i-Gamepron ngumboneleli we # 1 weeHacksside Dead Dead ezithandwayo ngesizathu!
Icala elingasekhoyo lodonga lokungena (ESP)
Ulwazi lomdlali ongasekhoyo i-ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Into esecaleni kwe-ESP eneefilitha
Izilumkiso zotshaba olusecaleni
Imowudi ye-Deadside super jump (akukho monakalo wokuwa xa usebenze)
Ithambo elingasekhoyo kunye neenjongo eziphambili ezinokuqwalaselwa.
Ukuhlawula kwakhona ukuhlawula
Ngokufanelekileyo Icaleni yimfumba Iimbonakalo
Umdlali wethu we-Deadside Player i-ESP sisixhobo esikuvumela ukuba ubone amathambo omdlali otshaba ngokusebenzisa indawo eziqinileyo kunye nokuqina, okuthetha ukuba uza kubona iintshaba ngeendonga!
Awukwazi kuphela ukubona iimodeli zomdlali kwiindonga, njengolunye ulwazi oluluncedo njengamagama abo, impilo, kunye nomgama okhoyo ngokunjalo.
Sebenzisa i-Deadside Item ESP ngezihluzi ukufumana lonke olona mpango lubalaseleyo! Akunyanzelekanga ukuba uchithe ixesha ngezinto ezingenanto xa usebenzisa i-Gamepron.
Sebenzisa i-Deadimb Aimbot ayizukukunika kuphela amandla afunekayo ukuthatha utshaba olunye kodwa uninzi ngexesha!
Ukulandela umkhondo weBullet (esebenzayo kumgama omfutshane kunye naphakathi)
Sikunika inketho yokulandela umkhondo weebhulethi zakho usebenzisa inqaku lokulandela umkhondo kweBullet, ugqibelele kokubini okufutshane kunye nokuphakathi komgama.
Umyalezo wesilumkiso uza kubonakala kwiscreen sakho nanini na utshaba lujolise kumlinganiswa wakho, okanye zisenokwenzeka ukuba zikufutshane.
Imowudi yokutsiba esecaleni okungasekhoyo (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza)
Ukuwa komonakalo kunyanzelekile ukuba ubulawe ngaxa lithile, oko kukuthi ngaphandle kokuba ucwangcisa ukusebenzisa i-Deadside Hack ngeMowudi yokutsiba okuMkhulu!
Ithambo elingasekhoyo kunye neenjongo eziphambili ezinokuqwalaselwa
Unokumisela i-Deadisde Aimbot yethu ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo, ezinje ngokuBekwa phambili kwamathambo kunye nokukhetha ukubulala kwangoko!
Ukutshekisha okubonakalayo okubonakalayo okungasekhohlo
Sebenzisa uphawu olubonakalayo lweeKhangelo ukugcina iithebhu apho ukufota kwakho kuhlala khona. Unokuqinisekisa ukubulala kunye nomonakalo ngokulula usebenzisa eli nqaku!
Ukufumana kwakhona kuyingxaki ngezizathu ezicacileyo, njengoko kuya konakalisa ukuchaneka kwakho. Yilahle kwaye udubule ngokuzithemba ngakumbi!
Yiba ngoyena mdlali ulungileyo wokufa kwiPlanethi
Icala elingasekhoyo ngumdlalo oza kukuvuza ngesisa ukuba ufumene umsebenzi ngokufanelekileyo, kwaye yile nto iHackside Dead yethu iza kukunceda ukuba uyifeze. Akukho lutshaba kulo mdlalo ongenakubetha usebenzisa i-Deadside Hack yethu, kwaye wakube uzame ngokwakho, uya kuqonda ukuba sisuka phi. Sebenzisa eli thuba kwaye uzuze isandla phezulu kubachasi bakho ngokusebenzisa i-Deadside Cheats yethu!
IiHacks eziDumileyo eziDumileyo kunye nokukhohlisa
Ukufa kwe-ESP kunye neWallhack
Ezinye iiHacks ezisecaleni kunye nokukhohlisa
SineeHacksside ezithandwayo kuphela kunye nokukhohlisa okufumaneka apha kwiGamepron, njengoko sinenqanaba elithile lemigangatho yokuxhasa. Xa uthenga isixhobo kuthi, unolindelo oluthile esihlala sihlangana nalo-yiyo loo nto sithathwa njengoyena mgangatho uphezulu wophuculo kwiwebhu ngoku! Ngelixa ezinye iinkampani zijija izithupha zazo kwaye zichithe ixesha kunye nezinto eziluncedo, siza kukunika ezona zixhobo zibalaseleyo. Senza oku ngokulinganisa ukuba abantu bafuna ukubona ntoni kwiiHacks zethu eziFileyo kwaye emva koko sisebenzise ezo mpawu ngokufanelekileyo. Ungalindela ukubona iziphumo xa ukhetha ukukopela ngeGamepron, njengoko amanqaku ebonakala ngathi awunakuphela!
Nge-Deadside Aimbot, i-ESP, iWall Hack, kunye neNoRecoil kwicala lakho, akukho ndlela yokuxelela ukuba uza kuthatha izinto kude kangakanani. Awusoze uphulukane nomnye umpu xa i-Deadside Cheats yethu yenziwe yasebenza! Phumelela imidlalo emininzi namhlanje ngeGamepron.
Njengoko uninzi lwee-Deadside Hacks luya kubonelela, sikunika ukufikelela kweyona Deadimb Aimbot ifumaneka kwi-Intanethi. Kungcono kakhulu kunayo nayiphi na enye indlela efunyenwe kwi-Intanethi ngenxa yazo zonke izinto ezibandakanyiweyo ngaphakathi, njengoko sikuvumela ukuba uzibonakalise ngokwakho amava e-aimbot. Ungasisebenzisa esi sixhobo ukugcina ukuchaneka kwakho kuyabulala ngalo lonke ixesha, njengoko unako ukwenza ukuthanda kokubulala kwangoko kunye nokuBekwa phambili kwamathambo ukubulala iintshaba zakho ngendlela ngqo oyithandayo. Unokukhetha ukugxila kwiintloko zabo, ukukunika ngakumbi iintloko (kunye nokubulala okungaphezulu!) Kunaye nawuphi na umntu okwiseva. I-Deadside Aimbot yethu idityaniswe ngokupheleleyo, ivumela abasebenzisi ukuba bathumele ngqo kwisenzo kwaye baqale ukubulala iintshaba ngokuthanda. Abanye abantu bagcuma kukuqhekeka, kodwa abayiqondi indawo esivela kuyo. Xa sele uqhele ukuba nenjongo yokusilela, nokuba yeyure okanye ezimbini zokusebenzisa i-Deadside Aimbot yethu iya kwanela ukutshintsha ingqondo.
Sebenzisa i-ESP yethu engummangaliso ukugcina iithebhu kubachasi bakho, kunye nokufumanisa ukuba aphi na amathuba afanelekileyo okuphanga! Icala elingasekhoyo ngumdlalo oye waphanga rhoqo, kwaye oko kuthetha ukuba ukusebenzisa into yethu i-ESP ngezihluzo kuzokutshintsha oko kube ngumceli mngeni kumoya ovuthuzayo. Unokufumana ezona zixhobo zibalaseleyo kunye nezixhobo ngokusebenzisa i-Deadside ESP kunye neWall Hack ukujonga iindawo eziqinileyo, ukukunika umfanekiso ogqibeleleyo wento engaphesheya. Oku kuyanceda naxa ukrokrela ukuba iintshaba zigudle kwelinye icala, njengoko unokuvula i-Deadside Wall Hack kwaye uziveze ngephanyazo.
Nokuba ucwangcisa ukudlala wedwa okanye nabahlobo, ukusebenzisa i-Deadside ESP kunye neWall Hack kuya kukunceda uqhubele phambili kwaye ufumane ukuphanga okungcono ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha. Ezo grinds zide kwaye zidikayo ziya kufinyezwa, yiyo yonke into onokuyithemba!
I-Deadside Hack yethu ikwafaka izinto ezithandwa ziimpawu zeNyawo, ezilungele xa ulandela intshaba kwaye ulinde ixesha elifanelekileyo lokuhlaba. Icala elisecaleni lilonke malunga nexesha, kuba awufuni ukungxama ngokukhawuleza - usebenzisa uphawu lweFointprint ukuze ubambe ixhoba lakho lihle, kodwa kuya kufuneka wazi ukuba uyasondela okanye awusondeli. Kulapho kudlala khona indawo yoMonakalo oMkhulu, njengoko uza kuba nakho ukubona ukuba lude kangakanani utshaba lwakho kwangaphambili. Oku kwenza ukuba ukubandakanyeka kube lula kwixesha kuba uyazi xa uza kusondela; Ngelo xesha, lixesha lokulungiselela imfazwe!
Nika amandla inqaku loMonakalo oMkhulu kwaye ubenze banqwenele ukuba bangaze bajoyine iseva yakho. Uya kwenza umonakalo omkhulu kunaye nawuphi na omnye umdlali ochasene naye odibana naye, kwaye inqaku lomgama liya kuqinisekisa ukuba awusoze ujongane "nohlaselo olothusayo".
Zininzi ezinye izinto ekufuneka uziqwalasele ngokuxhamla ngelixa usebenzisa i-Deadside Hack yethu, yiyo loo nto abathengi bethu bezimisele ukubeka ukholo lwabo kwi-Gamepron. Xa usazi ukuba isixhobo sinazo zonke izinto onokuzifuna, kutheni ungazihlupha ngomnye umboneleli? Sinokukunceda ukuba ufeze nantoni na ongathanda ukuyenza ngelixa udlala i-Deadside, yinto nje yokufumana ukufikelela kwi-Deadside Hacks kunye ne-Cheats zethu. Sikwabonelela ngeempawu uninzi lwabanikezeli bokungcola abangaphumeleliyo ukuziphumeza ngokwabo, ezinjengeRad ye-2D kunye nenqaku lesilumkiso eliza kukugcina ulumkisile ngalo lonke ixesha. Ukudutyulwa ngasemva yinto eyadlulayo xa ukopela ngeGamepron!
Ungakuphepha ukuthatha umonakalo owayo kunye nokufa ngokunjalo, njengoko "iNdlela yokutsiba Super" yethu iya kukuvumela ukuba uwele kumawa aphezulu onokucinga ngaphandle kokuthatha nawuphi na umonakalo. Oku kunokuba luncedo kakhulu xa ukhoyo
ngokuzama ukuzama ukunqanda utshaba!
IiHacks ezisecaleni imibuzo
Kutheni iiHacks zethu eziFileyo
Ukuba ufuna ukuziva ngathi uchithe imali yakho kwindawo elungileyo, ukusebenzisa i-Deadside Hack yeyona ndlela ilungileyo. Ngalo lonke olona phawu lubalaseleyo ulujongileyo kuHackside Hack, akukho nto inokwenziwa ziintshaba zakho ukunqanda ukuba uphumelele; nge Deadside Cheat yethu yenziwe, uza kuba ngumatshini ongaphumeleliyo.
Kutheni i-Deadimb Aimbot yethu
Kukangaphi ufumanisa ukuba injongo yakho incinci? Nokuba unosuku olubi kwaye unokwenza ngcono, iya kuba nefuthe kwimpumelelo oyibonayo kumdlalo. Xa ufuna ukuphumelela uninzi lwemidlalo yakho ngaphandle kwemibuzo ebuziweyo, unokuthembela kwi-Deadside Aimbot yethu ukuhambisa iziphumo ozifunayo.
Kutheni i-ESP yethu esecaleni
Sebenzisa i-Deadside ESP yethu kufuneka, njengoko kungekuphela nje apho uya kuba nakho ukubona izoyikiso ezinokubakho kwiindawo eziqinileyo, kodwa uya kuba nokukhetha ukubona eyona nto iphambili kuyo! Akunyanzelekanga ukuba uchithe lonke ixesha lakho uhluza izakhiwo ezingapheliyo, njengoko unokusebenzisa i-Item ESP ngezihluzi ukubona ukuba zonke izixhobo ezingcono (kwaye ziphangwe!) Zifihliwe.
Kutheni iWallhack yethu esecaleni
Nge-Deadside Wall yethu, ungazibona iintshaba kuzo zombini iindawo eziqinileyo kunye ne-opaque, ezenza ukucwangciswa kohlaselo kunye nokulalela kube lula. Uya kuhlala usazi xa utshaba lucele kwelinye icala lodonga olunalo olu ncedo, kwaye kumdlalo wokuphila onje nge-Deadside, yinto oya kufuna ukuyibona.
Kutheni iNorecoil yethu esecaleni
Ukuphinda ufumane amava kwi-Deadside kuyinyani njengoko injalo, kwaye nabani na ozenzele umdlalo ungangqina ngaloo nto. Xa ukubuyela umva kuphulukana nemipu kaninzi, amathuba okuba ube nakho ukufikelela kwiHackside Hack yethu. Uya kuzibuza ukuba wawudlala njani umdlalo ngaphambili xa wawuzamile umsebenzi wethu weNoRecoil okokuqala.
Ezona ndawo zibalaseleyo zokugqibela zeHackside ziyafumaneka apha kwiGamepron, nokuba umntu uthini na. Kuza kubakho iinkonzo phaya ezithi zinezona hacks zibalaseleyo, kodwa ayiyonyani leyo; ukuba awuyifumenanga kwiGamepron, ayizukuba yeyona nto ilungileyo yokuBulala. Beka olona nyawo lwakho lubalaseleyo phambili kwaye uthenge esinye sezitshixo zemveliso namhlanje!
Kutheni i-Deadside hacks yakho ibiza kakhulu kunezinye
Sinenani eliqingqiweyo lamabala afumanekayo kubasebenzisi bethu apha kwiGamepron, oko kuthetha ukuba kunokubakho amaxesha apho unganakho ukuthenga ukufikelela. Ngenxa yoko, amaxabiso ezitshixo zemveliso yethu kufuneka anyuswe ngenxa yeenkonzo ezizodwa- kungekuphela koko, kodwa iiHacksside Dead Dead (kunye nayo nayiphi na enye inkohliso esiyibonisayo) ayi-100% ayifumaneki.
Sikunika ithuba lokuthenga isitshixo semveliso phantse ngalo naliphi na ixesha elibekiweyo onokucinga ngalo, njengoko sikunika imveliso yezitshixo mihla le, ngeveki, nangenyanga. Ungakhangela ixesha elide okanye elincinci njengoko ungathanda xa ukhetha ukukopela ngeGamepron, njengoko sibeka amandla ngqo ezandleni zabasebenzisi bethu.
Kuhle Icaleni yimfumba Iimbonakalo